Madaxda dalka oo loogu baaqay in Jawaab cad ay ka bixiyaan Qariirada loogu gefay Qaranka Soomaaliya | Saadaal Media
May 27, 2019 - 2 Jawaabood
Hogaanka dowlada soomaaliya ayaa si deg deg ah loogu baaqay in jawaab waafi ah ay ka bixiyaan Qariirada Afrika oo si meel ka dhac ah ay Itoobiya ugu geftay Dalka.
Sawir muujinaya qariirada Afrika oo Soomaaliya gabigeed ba lagu daray Itoobiya marka laga soo tago Somaliland oo dhinac u taagan ayaa la soo dhigay,bogga internet-ka ee wasaarada Arimaha Dibeda Itoobiya.
Arintaan oo isla durbadiiba ku faaftay baraha bulshada ayaa waxaa ka carooday shacab weynaha soomaaliyeed inkasta oo Itoobiya ay ka saartay Sawirkaan.
Bulshada soomaaliyeed ayaa qoraalo ay soo dhigeen baraha bulshada ugu baaqay in dowlada ay ka jawaabto arintaan maadaama ay dalka Matasho.
Waxey sheegeen in wax ka liita aysan jirin dal ku xaqiray jiritaankaada wanaagna aysan ka raadinin oo ay ka hadasho dowlada.
Marka laga reebo an arintaan ay qalad dhanka Internetka ah ay ku timid lana baarayo sida ay sheegtay xukuumada Adiss ayaa hadane waxaa jirin raali galin lagu qanci karo oo aysan ka Bixin.
Arintaan ayaa waji gabax ku noqon doonta xiriirka soomaaliya iyo Itoobiya oo u muuqday bilihii la soo dhaafay in uu ka wanaagsan yahay sida uu ahaan Jiray.
Ra’isul wasaare Abiye Axmed oo sanadkii hore talada la wareegay ayaa siyaasad furfuran ka dhaliyay dalal ay cadaawad hore ka dhaxeysay Itoobiya,walow arintaan ay dhibkeeda hada Leedahay.
Wasiirka arimaha dibadda somalia waxaan oga fadhinna in u jawaab kabixiyo xadgudubyada iyo haqiraada etiobiya jiritaanka somalia, waayo waata u malin walba dacwad kadhan ah kenya meelaha la soo taaganyahay maadaama kenya u diiday laba qof viisa ku gal waddankeeda.
War heedhe dadkii Soomaaliyeed waxay wada noqdeen duul wada fudud oo aan arimaha si hoose oo degenaan leh uga baaraan degin,wax walba in jawaab laga bixiyo ma aha waxa waa inaad si degan u deristaa is weydiiya hadii itoobiya ay damacsantahay sidaas miyey kula wadaagi lahayd oo ay sirteeda shaacin lahayd waa maya waxaan waxa ka dambeeya nimankii shukooyinka qabay ee khaliijka weliba ha ugu horeeyaan Imaaraadka Abu Dhabi oo dagaal xun oo gunnimo ah kula jirta Soomaaliya oo si kasta oo ay ku hor istaagto isku deyaysa dawlad Soomaaliyeed oo xoogan waxa dabada ka wada Kenya waa iyada Sanbalooshe iyo Hargeysa waxa isku xiraya waa ayada waana iyada hada waxa jabsaday website wasaarada arimaha dibada ee itoobiya oo khariidada foosha xun geliyey horey ayay waxaan u sameeyeen oo amiirka Qatar ay war been ah ugu qoreen website kiisa war Soomaalaay tosa oo ha ku mashquulina wax aan macno lahayn hagaajista dalkiina oo dawladiina garab istaaga hadii aad rabtaan inaad dad iska dhicisaan.